Kalifoorniya oo halis ugu jirta dhulgariir weyn | Saadaasha Shabakadda
Kalifoorniya waxay ku dhowdahay halista dhulgariir weyn
In ka badan 140 gariir ayaa California geliyay heegan, waana taa dhulgariir weyn ayaa dhici kara daqiiqad kasta. Dhulgariirrada, oo lahaa xoog u dhexeeya 1,4 iyo 4,3 sida laga soo xigtay Sahanka Juqraafiga ee Mareykanka (USGS, oo loo soo gaabiyay Ingiriis), waxay saameyn ku yeelan laheyd cilladda San Andrés, oo khatar ku ah dalka.
Kalifoorniya waxaa gariirin kara dhulgariir xoog ah 7 ama ka sareeya, iyada oo ay sabab u tahay khilaafka u dhexeeya saxanka Waqooyiga Ameerika iyo saxanka Baasifigga.
In ka badan 140 gariir ayaa la diiwaan geliyay maalmihii la soo dhaafay waxay ka dheceen Badda Salton, oo ah haro ku taal waqooyi-bari San Diego. In kasta oo ayan ahayn kuwo aad u kacsan, haddana waxay ka walwalayaan khubarada, kuwaas oo ka digay arrintaas ilaaliyahaaga hoos uma dhigi kartidmaadaama dhulgariir aad u xoog badan uu dhici karo waqti kasta.
Magaalooyinka sida San Diego, Ventura, San Bernardino, Riverside, Orange, Los Angeles, iyo Kern iyo Imperial countiyada ayaa noqon kara kuwa ugu horeeya uguna saameynta badan dhulgariirka suuragalka ah, sidaa darteed digniinta ugu badnaan.
Weli, agaasimaha Xarunta Koonfurta Dhulgariir ee Koonfurta California, Thomas H. Jordan, ayaa rajo wanaagsan leh. Wuxuu faallo ka bixiyay in fursadaha dhulgariir baaxad leh oo dhici kara saacadaha soo socda ay yar yihiin, maxaa yeelay gariirrada ku dhaca Badda Salton sidoo kale way yaraadeen. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira qaybo ka mid ah qaladka San Andrés oo shaqeynayay muddo dheer. Kaasi waa kiiska koonfurta ee kala jabka ah, oo dhulgariir soo saarayay 330 sano.
Dhulgariirro waaweyn oo ka dhaca Kaliforniya ayaa dhaca mid kasta 150 ama 200 sanoSidaa darteed, hanjabaadu marwalba way jirtaa, gaar ahaan tixgelinta in 1906 uu jiray mid ka mid ah cabirka u dhexeeya 7,9 iyo 8,6 ee San Francisco oo sababay in ka badan dhimashada 3000.
Haddii aad rabto inaad ogaato maxay yihiin dhulgariirradii ugu dambeeyay ee dhacay, waad sameyn kartaa halkan guji.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Kalifoorniya waxay ku dhowdahay halista dhulgariir weyn